गुटलाई निस्तेज र असल कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरिनुपर्छ
गुटलाई निस्तेज र असल कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरिनुपर्छ अमृता थापा, नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा संयोजक अखिल नेपाल महिला संघ
जनतापाटी बुधबार, माघ १५, २०७६ मा प्रकाशित
केन्द्रिय कमिटीको वैठकबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ?
ऐतिहांसिक पार्टी एकता पछि हुन लागेको यो वैठक केवल हाम्रो पार्टीको लागि मात्र होइन, देशकै लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । देशकै नेतृत्व गरिरहेको र देशका सबैभन्दा बढी जनतासंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको पार्टीको वैठक भएकोले पनि यो वैठकले गर्ने निर्णय केवल हाम्रो पार्टी पङितलाई मात्र होइन, देशका सबै नागरिकहरुको लागि चासोको विषय बनेको छ ।
यो वैठकले देशमा विद्यमान धेरै समस्याहरुलाई समाधान गर्ने गरि स्ष्ट मार्ग चित्र तयार गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । पार्टी पङितलाई कृयाशिल बनाउंदै असल कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित र परिचालित गर्नेछ र त्यसले अगामी दिनमा पार्टीलाई अझ शसक्त रुपमा जनताको विचमा स्थापित गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
एकातर्फ पार्टी एकता प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भने अर्काेतर्फ गुटहरु झांगिएका छन्, यो अवस्थामा तपाईले भन्नु भए जस्तै शसक्तरुपमा निर्णय हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
हो, पार्टी भित्र गुटहरु छन् । गुटहरु सम्पूर्ण रुपमा कहिल्यै पनि समाप्त हुदैनन् तर गुट उपगुट झांगिने मौका कहिले पाउंछन् ? जब पार्टीमा वैठक, छलफल हुदैन, एक अर्कामा पार्टी पद्धतीबाट सम्वाद र निर्णयहरु हुंदैनन्, तब गुट उपगुट झांगिन्छ । पार्टी काम व्यवस्थित भएर नियमित रुपमा भेला, वैठकहरु हुने हो भने असझमदारीहरु वैठकबाटै हल हुन्छन् । वैठक नै नवसेपछि कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी पोख्न थाल्छ, अनि गुटहरु जन्मिन्छन् । त्यसैले हरेक तहका पार्टी कमिटीहरुको नियमित रुपमा भेला, वैठकहरु हुने, असन्तुष्टिहरुलाई त्यहीबाट सम्वोधन हुन्छन् । यो केन्द्रिय कमिटीको वैठकपछि पार्टीका हरेक निकाय र कमिटीहरुलाई स्पष्टरुपले जनवादी केन्द्रियताको आधारमा संचालन गर्ने, नेता कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक दृष्टिले प्रशिक्षित गर्ने कामको थालनी हुनेछ । त्यसपछि गुट उपगुटका कुरा पनि आफै व्यवस्थित हुनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
स्थानीयतह देखि प्रान्त, संघ जताततै नेकपाको प्रभावकारी सरकार छ, तर संख्यात्मक हिसावले जति प्रभावकारी भए पनि काम भने प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबारेमा पनि वैठकमा कुरा उठाउंदै हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि । वैठक भनेकै पार्टीसंग जोडिएका हरेक विषय र पक्षहरुमा छलफल गर्ने, समस्याहरुको समाधान खोज्ने र भावि रणनीति तयार गर्ने ठाउं हो । यो वैठकमा पनि पार्टी, देश र जनतासंग सम्वन्धित हरेक समस्याहरुको समाधान पहिल्याएर भावि रणनीति तयार गरिनेछ । स्थानीय, प्रान्तिय र संघिय सरकारहरुको काम कारवाही कस्तो छ ? उनीहरुले काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिरहेका छैनन्, समस्याहरु के कस्ता छन् र ती समस्या समाधानको लागि पार्टी पङितले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने नै छ ।
नेताहरु पितृ सतात्मक मानसिकताबाट ग्रसित भएको र पार्टी संगठन तथा राजकिय पदहरुमा महिलालाई अवसरहरुबाट वन्चित गर्ने गरिएको कुरा थुप्रै महिला नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बताउने गर्नु भएको छ । तपाई पार्टीको महिला संगठनको अध्यक्ष, तपाईलाई के लाग्छ ?
अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना नै महिलाहरुलाई सामाजिक, आर्थिकरुपमा पुरुष सरह अधिकार दिलाउनको लागि भएको हो । त्यहीकारण हाम्रो संगठनले स्थापनाकालदेखि नै शसक्तरुपमा महिला अधिकारको कुरा उठाइरहेको छ ।
तर, अझै पनि महिला अधिकारलाई प्रभावकारीरुपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । संवैधानिकरुपमै हामीले केही अधिकारहरु स्थापित गरेका छौं । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा संविधानको भावना अनुसार कार्यान्वयनको लागि अग्रसर देखिएका छैनन् । त्यस्तो समस्या केही हदसम्म हाम्रो पार्टी भित्र पनि छ । त्यसैले हामीले यो मुद्धालाई हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, हरेक पार्टीहरुका विधान, संवैधानिक व्यवस्था र चुनावि घोषणा पत्रमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार कार्यान्वयन गरिनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । यो वैठकमा पनि त्यस्तो विषय उठिहाल्छन् । पार्टी कमिटीलाई समावेशी बनाइनु पर्छ र क्षमताअनुसार महिला नेता कार्यकर्ताले पनि अवसर पाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउंछौं । यो वैठकमा मात्र होइन, हरेक वैठक र फोरमहरुमा त्यस्तो कुरा उठ्छ, उठाउंदै आएका छौं ।
हामीले यो मुद्धालाई पार्टी पङितमा मात्र नभएर हरेक पार्टीहरु, फोरमहरुमा उठाउंदै आएका छौं । अब झन शसक्तरुपमा उठाउने छौं ।